Eps Machines, Eps Ebu na mapụtara Parts - Dongshen
Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche metụtara EPS igwe, EPS ebu na akụkụ ahụ mapụtara maka EPS igwe. Anyị nwere ike ịnye ụdị ụdị EPS dị ka EPS Preexpanders, EPS Shape Machines, EPS Block Molding Machines, CNC Cutting Machines wdg. ha, anyị na-enyere ụlọ ọrụ EPS ochie aka iji meziwanye mmepụta ha site na mbenata ike ike na ịbawanye ikike mmepụta. E wezụga nke ahụ, anyị na-enye ọrụ nke ịmepụta igwe EPS pụrụ iche dịka ndị ahịa na-arịọ. Anyị na-omenala-eme EPS Ebu maka ọzọ ika EPS igwe si Germany, Korea, Japan, Jordan wdg
Banyere Ngwa anyị
Akwa ziri ezi
Anyị na-eji World first class brand OKUMA machining tool to process our machine plate, ya mere igwe anyị ziri ezi dị elu.
Na-anọ ogologo oge
Anyị na-eji oké ihe na-eme igwe, otú anyị igwe bụ mgbe arọ na ike karịa ndị ọzọ na asọmpi ', na ígwè ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ ogologo. Ọtụtụ ndị ahịa anyị ka na-eji ihe karịrị afọ 15 arụ ọrụ ochie.
Mmepụta dị elu
Igwe anyị na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa otu ọkwa ọkwa site na ndị asọmpi ndị ọzọ. Ndị ahịa nwere ike ịnweta ma ọ dịkarịa ala 10% mmepụta dị elu site na igwe anyị.
Akụkụ ndị dị na ya na ngwa ndị ama ama ama mere ka igwe anyị rụọ ọrụ nke ọma ma kwụsie ike, na-ebelata ọnụahịa nke mmezi igwe.
DS1100-FDS1660 EPS ogbe ụdị pre expander
SPY90-SPY120 Na-aga n'ihu Pre expander
PB2000V-PB6000V agụụ ụdị ngọngọ ịkpụzi igwe
PB2000A-PB6000A Air jụrụ ụdị ngọngọ ịkpụzi ...
SPB2000A-SPB6000A EPS Kemeghi Type Block Mol ...
Na ndị ahịaNa ndị ahịa
Soro na ngosi EPS ọkachamara
N'afọ ndị gara aga, anyị sonyeere ọkachamara EPS igwe ngosi na Jordan, Vietnam, India, Mexico na Turkey wdg Mba. N'iji ohere nke ihe ngosi ahụ, anyị zutere ọtụtụ ndị ahịa ndị zụrụrịrị igwe EPS n'aka anyị ọ bụ ezie na ha anaghị ezute ibe anyị, anyị zutere ndị enyi ọhụrụ ndị nwere atụmatụ iwu osisi EPS ọhụrụ. Site na nkwukọrịta ihu na ihu, anyị nwere ike ịmatakwu ihe ha chọrọ, ka anyị wee meere ha azịza dabara adaba. N'ime ụlọ ọrụ ndị ahịa dị iche iche gara, ihe kacha masị m bụ otu ụlọ ọrụ EPS ...
banyere ICF (insulated ihe template)
ICF, Mpempe akwụkwọ a gwara agwa, na ndị China na-akpọkwa ya nkewapụ EPS modul ma ọ bụ EPS blocks. E mere ya site EPS udi ịkpụzi igwe na ICF ebu. Kinddị ụdị modulu EPS a dị oke mma na mkpuchi ọkụ na mkpuchi mkpuchi. A nwalere ya na nchekwa nchekwa nke ụlọ nke ogige ICF nwere ike iru 65%. Mkpokọta EPS ICF abụghị naanị na-enye ụzọ dị irè maka iwulite mgbidi mgbidi mpụga na mpaghara oyi, kamakwa ọ na-edozi nsogbu nwube dị ka ịchapụ elu nke mgbidi mpụga na ogologo oge. Ihe ICF modul ...
Akwụkwọ akụkọ mberede Coronavirus kwusara azụmahịa ụwa. Ọtụtụ ndị ahịa na-echegbu onwe ha na ha enweghị injinia iji wụnye ma ọ bụ mezie igwe ndị ha zụtara n'aka China. Ee, ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-ebubata ngwaahịa nwere nsogbu a, mana ọ bụghị na ụlọ ọrụ anyị, n'ihi na na mgbakwunye na ndị injinia China, anyị nwekwara ndị injinia nwere ahụmahụ India, na ndị injinia Jọdan. Naanị na Nọvemba, onye injinia anyị nke India gara Yemen ịwụnye akara igwe EPS Shape. Onye ahịa ahụ zụtara EPS SHAPE MOLDING MACHINE dum, gụnyere EPS BATCH PREEXPANDER, SILOS, EPS SHAPE Molding igwe ...